Isikhokelo sika-Iwata esitsha somoya: Iindlela ezi-4 zokutshiza
"Iindlela ezine zokutshiza" - leli ligama lengcinga entsha yokuthengisa evela kumenzi webrashi yomoya iJapan. Inkampani ithathela ingqalelo ubunzima, kodwa inyathelo eluncedo kakhulu kubaqalayo, ngesi sibonelelo sebrashi yomoya ongayichaza ukuba inobuhlobo. Injongo apha kukunika abo banomdla kwiibhrashi zomoya jonga elihle kwiimpawu kunye nezinto eziluncedo kuzo zonke iikhomputha zebrashi ezingaphezulu kwama-30, ngokwenza njalo kube lula ukukhethwa kwakhe kunye neemfuno zakhe. Unokuqhelana neenkqubo ezifanayo kwihlabathi leemidlalo, okt i-tennis racket iya kwahluka kwisikali ngokokukhawuleza okanye ngokuchanekileyo kwayo.
Iwata isitshiza umpu. Ngokwokwahluka kwejometri yezinto ezahlukeneyo zeentlobo ezahlukeneyo zepeyinti, ezi ndlela zilandelayo zihlala zisetyenziselwa ukuqhuba umpu we-Iwata eJapan.
1. Indlela yokutshintsha yokutshiza. Ipateni yokutshiza ithe ngqo. Bamba umpu wokutshiza ngesandla sasekunene. Qala kwicala elingaphezulu lasekhohlo lomqhubi, hambisa is spanner ukusuka ngasekhohlo uye ekunene. Yenza umgama wokujikeleza ngokukhawuleza uye ngasekhohlo. Ngokubanzi, umdibaniso odibeneyo ngu-1/2, 1/3 kunye no-1/4, onokulungelelaniswa ngohlobo lokupheka. Xa enye indawo igqityiwe, fafaza omnye umhlaba ngokulandelelana. Ngokwesiko, ukutshiza kunokuqhutywa ukusuka kwelinye icala, okt ukusuka kwicala lasekunene lomqhubi ukuya kwicala elingaphezulu.
2. Indlela yokutshiza endeitudinal. Le ndlela iyafana nendlela ethe tyaba yokutshiza, ngaphandle kokuba iphethini ye-Iwata yaseJapan yokutshiza umpu uguqulwe ujonge kwicala elithe tye, kwaye umpu wokutshiza ubaleka usiya ngasekhohlo, ngasentla okanye phezulu uye ezantsi nasemva. Ungabaleka usiya ngapha nangapha ukusuka ezantsi ngasekunene okanye ezantsi ngasekhohlo.
3. Indlela enqamlezileyo kunye ethe tye. Xa ukutshiza, fafaza emva nangaphambili. Xa usitshiza okwesibini, fafaza sibuyele emva nangaphezulu. Guqula ikhowudi yomzobo ngalo lonke ixesha.